ဗဟုသုတတိုးစေဖို့ သွားကြည့်သင့်တဲ့ သမ္မတစာကြည့်တိုက်များ
17 Apr 2019 . 5:10 PM
စာအုပ်စာပေချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်းဟာ စာကြည့်တိုက်သွားပြီး စာအုပ်စင်လေးကို မှီပြီး စာရွက်အနံ့လေးတွေ ရှုရှိုက်ကာ စာဖတ်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်ဟုတ်။ ဘယ်စာကြည့်တိုက်လေးမှာတော့ ဘယ်လိုအေးအေးဆေးဆေး ဖတ်လို့ရတယ်လို့ ပြောလိုက်ရင် သွားဖတ်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်၊ ဘယ်စာကြည့်တိုက်မှာ စာအုပ်တွေက ဘယ်လိုစုံတာလို့ ဆိုပြီး ကြားရင် တစ်နေ့တော့ အဲ့ဒီကို အရောက်သွားပြီး စာဖတ်မယ်ဆိုပြီး တေးထားတဲ့ စိတ်မျိုးလေးတွေတော့ ရှိကြမှာပါ။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာက စာကြည့်တိုက်တွေဟာ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်လက်ရာတွေနဲ့ မွမ်းမံတည်ဆောက်ထားပြီး စာကြည့်တိုက်ထဲ ခြေချလိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေကိုလည်း တပုံတပင်တွေ့မြင်ရတဲ့အပြင် အနုပညာမြောက်လက်ရာတွေကိုလည်း မဆုံးနိုင်အောင်ခံစားကြည့်ရှုနိုင်ကာ၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကိုပါ လေ့လာလို့ရလို့ ပြန်မထွက်ချင်လောက်အောင် စာပေချစ်သူတွေကို စွဲဆောင်ထားမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့်မို့ စာအုပ်စာပေချစ်တဲ့ စာကြမ်းပိုးလေးတွေ နိုင်ငံရပ်ခြားကို အလည်အပတ်သွားဖြစ်ခဲ့ရင် သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်စေဖို့ နာမည်ကြီး သမ္မတအိမ်တော် စာကြည့်တိုက်တွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Franklin D. Roosevelt စာကြည့်တိုက်နဲ့ ပြတိုက်
Franklin D. Roosevelt က အမေရိကန်ရဲ့ ၃၂ ယောက်မြောက် သမ္မတဖြစ်ကာ သမ္မတစာကြည့်တိုက်ကို ပထမဆုံးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ သမ္မတ ဖြစ်ပါတယ်။ Franklin D. Roosevelt စာကြည့်တိုက်ကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ဖက်ဒရယ်အစိုးရကို လှူဒါန်းရာမှ စပြီး တည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၃၉ ခုနစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာကြည့်တိုက်ကတော့ New York ရဲ့ Hyde Park ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ ၁၉၅၀ ခုနစ်တုန်းက ခန့်မှန်းချက်အရဆိုရင်တော့ ဒီစာကြည့်တိုက်ထဲမှာ ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း သန်း ၅၀ ကျော်ရှိပါတယ်ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။ သန်း ၅၀ ကျော်ထဲမှာမှ စာအုပ်ပေါင်း ၁၆,၀၀၀ အုပ် ၊ ဓာတ်ပုံပေါင်း ၁၅,၀၀၀ ၊ ၂၇၅,`၀၀၀ ပေရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖလင်တွေနဲ့ အသံသွင်းထားတဲ့ဓာတ်ပြားပေါင်း ၃၀၀ လောက် စုစည်းထားရှိထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲ့ဒီမှာလည်း ရှားပါးစာအုပ်တွေကို စုဆောင်းထားပါတယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ New York ကိုရောက်လို့ အခါအခွင့်သင့်ရင် စာပေချစ်သူတိုင်း သွားကို သွားလည်ကြည်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Abraham Lincoln သမ္မတစာကြည့်တိုက်နဲ့ ပြတိုက်
Abraham Lincoln ဟာ ၁၈၆၀ ခုနှစ်ကတည်းက သမ္မတဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် Abraham Lincoln သမ္မတစာကြည့်တိုက်နဲ့ ပြတိုက်ကတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ စာရင်းထဲကို ထည့်သွင်းခြင်း မခံရပါဘူး။ Abraham Lincoln သမ္မတစာကြည့်တိုက်နဲ့ ပြတိုက်ဟာ အဆောက်အဦးတစ်ခုစီ သီးသန့်တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်နဲ့ ပြတိုက်ဟာ လမ်းရဲ့တစ်ဖက်စီမှာ တည်ရှိပါတယ်။ အဲဒီသမ္မတစာကြည့်တိုက်ဟာ သုတေသနစာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပြီး Lincoln ဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေ၊ စာရွက်တွေ၊ ရှေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ Springfield မှာ နေခဲ့တဲ့ သမ္မတ Lincoln ရဲ့ ပုံရိပ်တွေ၊ White House မှာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်တွေနဲ့ Ford’s ပြဇာတ်ရုံမှာ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် လုပ်ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုပါ ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ Lincoln ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေကို သေသေချာချာလေးတွေ့မြင်ရမယ့်နေရာမျိုးပါ။ စာကြည့်တိုက်နဲ့ ပြတိုက်တည်ရှိတဲ့ နေရာကတော့ Illinois ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော် Springfield မှာ တည်ရှိပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး Lincoln ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့ တစ်ခါလောက်တော့ သွားကြည့်သင့်တဲ့အထဲမှာ ပါပါတယ်။
John F. Kennedy သမ္မတစာကြည့်တိုက်နဲ့ပြတိုက်
John F. Kennedy သမ္မတစာကြည့်တိုက်နဲ့ပြတိုက်ဟာ အမေရိကန်ှနို်င်ငံရဲ့ ၃၅ ယောက်မြောက် သမ္မတ John F. Kennedy တည်ထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာကြည့်တိုက်ဟာ United States ၊ Boston Massachusetts ရဲ့ Columbia Point မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ဒီစာကြည့်တိုက်ကို ဗိသုကာပညာရှင် I.M. Pei က ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်နဲ့ ပြတိုက်ရဲ့မူလအကျယ်အဝန်းကတော့ ၁၁၅,`၀၀၀ စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းတယ်လို့ သိရှိခဲ့ရပြီး ယခုအခါမှာတော့ နည်းပညာအရ တိုင်းတာထားတဲ့ အတိုင်းအတာကတော့ ၁၀ ဧက(၄၀,၀၀၀ စတုရန်းမီတာ) ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ ဒီစာကြည့်တိုက်နဲ့ပြတိုက်မှာ အထပ် (၉) ထပ်ပါရှိပြီး အဖြူရောင် Concrete Tower ကို မှန်အပြည့်နဲ့တန်ဆာဆင်ပြီး ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အဆောက်အဦးတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားကာ ဘေးကပ်လျက်အနီးဆုံးမှာတော့ Smith Center ရှိပြီး တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ Lobby ၊ Museum Theater တွေ ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ Ernest ရဲ့ ဇနီး Mary Hemingway က လှူဒါန်းထားတဲ့ Ernset Hemingway Paper တွေလည်း ရှိပါတယ်။
William McKinley သမ္မတစာကြည့်တိုက်နဲ့ ပြတိုက်
William McKinley သမ္မတစာကြည့်တိုက်နဲ့ ပြတိုက်ဟာ ၂၅ ယောက်မြောက် အမေရိကန်သမ္မတ William McKinley တည်ထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာကြည့်တိုက်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ Ohio ပြည်နယ် Canton မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။ ဒီစာကြည့်တိုက်မှာ McKinley ရဲ့အိမ်မှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပရိဘောဂတွေကိုပါ လေ့လာလို့ရပါတယ်။ နောက်ထပ် ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ သမ္မတဟောင်းကတော် Ida Saxton McKinley ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ရွှေနဲ့စိန်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Tiara ကိုလည်း ပြသထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီစာကြည့်တိုက်မှာ တချို့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေပါ ထားရှိပြီး Science Center အဖြစ်လည်း ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီစာကြည့်တိုက်နဲ့ ပြတိုက်ကို သွားလည်မယ်ဆိုရင်တော့ သိပ္ပံဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတွေကိုပါ တစ်ပါးတည်း လေ့လာခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာလေးတွေက ဗဟုသုတရရှိမယ့် နေရာလေးတွေဖြစ်တဲ့အပြင် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေကိုပါ တစ်ပါးတည်း လေ့လာလိုက်စားလို့ ရတဲ့အတွက် စာရေးသူအနေနဲ့ အခါအခွင့်သင့်ရင် တစ်ခါလောက်တော့ ဒီနေရာတွေထဲက တစ်နေရာရာကို ရောက်အောင် သွားလေ့လာဖို့ တေးမှတ်ထားလိုက်ပါပြီနော်။ ပရိသတ်ကြီးရော ဒီလိုသွားရောက် လေ့လာဖို့အတွက် တေးမှတ်ထားတဲ့ နေရာလေးတွေရှိကြလား။ ရှိရင်လည်း စာအုပ်စာပေချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေနဲ့ သမိုင်းဝင်နေရာလေးတွေကို ချစ်မြတ်နိုးလို့ လည်ပတ်ချင်တဲ့သူတွေ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်စေဖို့အတွက် လက်တို့ပြီး ပြောပြပေးလိုက်ကြပါဦးနော်။